Rivo-doza Irma: tatitra momba ny fisokafan'ny trano fisofana Villa ao St. Barths, Anguilla, St.Martin, USVI, BVI
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Rivo-doza Irma: tatitra momba ny fisokafan'ny trano fisofana Villa ao St. Barths, Anguilla, St.Martin, USVI, BVI
Ny rivodoza Irma dia mbola ao anatin'ny fomba fanarenana any Karaiba ihany. Ho an'ny vanim-potoana manomboka ny 1 Nov 2018, ny Private Villa Operator WIMCO dia manome tatitra momba ireo nosy naterak'i Irma:
96% amin'ny portfolio villa WIMCO misy villa 355 no hisokatra
Ny 84% amin'ireo efitrano fandraisam-bahiny izay soloinay solontena dia hisokatra
Trano fisakafoanana 70 mahery no hisokatra
Tatitra fitsirihana ny toerana WIMCO avy any St Barths
Teny nalaina avy amin'ny ekipan'ny dia:
"...Raha ny momba ny nosy - amin'ny teny hoe –mahafinaritra! Milamina tsara ireo villa notsidihinay, ary niasa tsy nisy kilema ny internet tao amin'ireo villa, nanome ny vaovao maraina isan'andro ny fahitalavitra satelita, feno ny dobo, ary toy ny tsy nisy mihitsy izany. Nisy fampisehoana maro loko ny varavarankelin'ny fivarotana butik, misy safidy maro hisakafoanana any ivelany, ary ny ankamaroan'ny trano dia feno ny fivarotana enta-madinika.
Misokatra ny 85% amin'ireo villa 60 izay solontenantsika
Hisokatra ny 100% amin'ireo trano fandraisam-bahiny soloinay
Hisokatra avokoa ireo trano fisakafoanana an-tampon'ny mpitsangatsangana matetika any Shoal Bay sy Sandy Ground
Tatitra fitsirihana ny toerana WIMCO avy any Anguilla:
"Nahasitrana tanteraka i Anguilla, naverina tamin'ny laoniny tanteraka ny fotodrafitrasa sy ny serivisy rehetra ary nampiantrano vahiny izahay nandritra ny volana maro, ary ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana 100 dia misokatra izao. Misy tafo vitsivitsy tsy hita eny amin'ireo tranga taloha (trano fanao any Karaiba) ary misy faritra misy hazo na hazo rofia. Na eo aza izany dia toa madio kokoa ho antsika i Anguilla noho ny taloha. Amin'ny ankapobeny, milamina tsara ny nosy, ary ny ekipanay dia miambina tsara ny vahiny. Tsy tsapanay ho diso fanantenana ny vahiny iray.
Misokatra ny 45% amin'ireo villa 100 izay solontenantsika
Tatitra fitodiana WIMCO avy any St Martin. Teny nalaina avy amin'ny ekipan'ny dia:
"Tsia, tsy misy antontam-bato marobe eny amoron-dalana rehefa mamakivaky ny French St Martin ianao, na izany aza misy porofo fa maro ireo trano mbola eo am-panamboarana sy simba, ireo dia handany fotoana hiverina amin'ny ara-dalàna. Ireo villa mihoatra ny 20 no nojerenay dia nilamina avokoa, ary vonona handray ireo mpanjifa. Amin'ny lafiny fisakafoanana dia misy safidy tsara. Niezaka ny nankany amin'ny Meza Luna izahay ary feno ny famandrihana azy izay marika tsara, noraisin'i Mario's tao Cupecoy izahay ary nahafinaritra tokoa ny sakafo hariva tao. Nahita zavatra tsara hafa koa i Alinas any Simpson Bay, sushi tena tsara ary mampiala voly, tsara tokoa fa nanandrana indroa izahay! Ny lafiny tsara iray hafa dia orinasa vaovao nosokafana taorian'ny Irma. ny Pelikaan Brewery ao Cole Bay St Martin dia nanomboka nandatsaka sud ary manana labiera tena tsara azo alaina ohatra. Ny Lagoonies Bistro Bar dia zava-nisongadina hafa. Ao amin'ny laharan'ny trano fisakafoanana ao Grand Case, trano fisakafoanana 5 ihany no nisokatra, ary asa lehibe sisa no tafaverina hamerina ity faritra ity amin'ny voninahiny taloha. Ao amin'ny faritra Simpson Bay Marina sy Harbour dia mbola afaka mahita sambo rendrika sy sambo matoatoa simba sy mitsingevana. Avy amin'ny resaka nifanaovana tamin'ny mponina dia nilaza izy ireo hoe: “Ha, tokony ho nahita an'io faritra io ianao 2 volana lasa izay!” Ka fanatsarana no anaovana isan'andro. Na eo aza ny toe-pahasalaman'ny nosy, miaraka amina orinasa sy fonenana marobe mbola tafita na amboarina, mitohy ny fiainana. Nivoaka ny olona ary nifalifaly. Amin'ny ankapobeny, tsara ny mahita ny fahaizan'ny mponina, ny villa toa tsara, ary ny trano fisakafoanana izay nalehanay dia mahafinaritra. Raha mbola fantatry ny mpanjifa ny zavatra hidirany ary te-ho any St Martin dia heverinay fa hanana fotoana mahafinaritra izy ireo ary mahatsapa tsara ny fanampiana amin'ny fanohanana ny harinkarenan'ilay nosy. ”
Misokatra ny 80% amin'ireo villa 60 izay solontenantsika
Nisokatra indray ireo trano fisakafoanana ao Cruz Bay
Ny hotely Westin St John dia mikendry ny daty fisokafan'ny Winter Break 2019
Caneel Bay hotel dia mikendry daty fanokafana Thanksgiving 2019
Virgin Gorda sy ny faritra BVI / North Sound
Villa 20 no misokatra ho an'ny fanombohan'ny vanim-potoana ao amin'ny Virgin Gorda, mnainly ao amin'ny faritr'i Mahoe Bay
Ireo villa ao amin'ny faritr'i Leverick Bay dia mila fotoana bebe kokoa amin'ny fanamboarana
Ho fanampin'izay, hanana villa misy izahay any ampitan-dranomasina:
Vohitra 5 ao amin'ny Bay Nut Oil no hisokatra
Villa 5 ao amin'ny nosy Scrub no hisokatra
Hisokatra ireo villa ao amin'ny Necker Island
Little Dix Bay hotel dia mikendry daty fanokafana Thanksgiving 2019
Ny Czech Airlines Technics dia miditra amin'ny sehatry ny serivisy vaovao amin'ny varotra azo ampiasaina amin'ny fiaramanidina
Ny mpitsangatsangana manerantany any Cape Town dia nanomboka ny hetsika fizahan-tany #ItsAllStillHere